Tilmaamaha-hawada cusub ee Iwata: 4 siyaabood oo loogu buufiyo
“Afar qaab oo lagu buufiyo” - kani waa magaca fikradda cusub ee suuqgeynta ee ay soo saartay shirkadda soo saarta hawada Japan ee Iwata. Shirkadda waxay moodeysaa inay adag tahay, laakiin talaabo si gaar ah u caawineysa dadka bilowga ah, iyadoo ujeedo qaabeynta hawada ay tahay mid aad ku tilmaami karto inuu yahay mid saaxiibtinimo adeegsanaya. Ujeeddada halkan ayaa ah in la siiyo kuwa xiiseeya hawo-jeexjeexyada fiirinta astaamaha iyo faa'iidooyinka unug kasta oo ka mid ah 30-ka nooc ee hawo-mareennada ah, si markaa loo fududeeyo xulashada baahiyaha shaqsiyadeed. Waxaa laga yaabaa inaad aqoon u leedahay nidaamyada la midka ah ee ka jira adduunka isboortiga, halkaas oo tusaale ahaan xargaha tennis-ka uu kaga duwanaan karo cabir ahaan marka loo eego dhaqsotiisa ama saxnaantiisa.
Qoriga lagu buufiyo Iwata. Marka loo eego kala duwanaanta joomatari ee walxaha kala duwan ee noocyada kala duwan ee rinjiga, hababka soo socda waxaa badanaa loo adeegsadaa in lagu hawlgaliyo qoryaha lagu buufiyo Iwata ee Japan.
1. Qaababka buufinta. Qaabka buufinku waa mid toosan. Ku qabo qoryaha buufin gacanta midig. Ka bilow dhinaca bidix ee sare ee wadaha, u dhaqaaq wareebka bidix ilaa bidix. Samee safar wareegsan oo deg deg ah bidix iyo bidix. Guud ahaan, dusha wadajirka ah waa 1/2, 1/3 iyo 1/4, oo lagu xiri karo iyadoo loo eegayo nooca dahaarka. Marka hal aag la dhammaystiro, buufin meel kale oo isku xigta. Sida caadadu tahay, buufin sidoo kale waxaa lagu fulin karaa jihada ka soo horjeedda, taasoo ah laga bilaabo dhinaca midigta hoose ee wadaha ilaa dhinaca kore.
2. Qaababka buufinka Longitudinal. Qaabka wuxuu la mid yahay habka buufinka toosan, marka laga reebo in qaabka Jabbaan ee Iwata buufiyaha rasaasta loo beddelo jihada safka ah, oo qoriga buufinku uu ka socdo bidix, kor ama dusheeda midig iyo hoos. Waxaad sidoo kale dib ugusoo socon kartaa gadaasha hoose ama bidix.
3. Qaabka toosan iyo jihada toosan. Markaad buufiyo, si tartiib ah u buufi gadaal iyo gadaal. Marka labaad buufin markale, dib iyo gadaalba ugu buuf. Beddel jihada sawirka mar kasta.